Maxaad hadhin Pictures on iPhone?
Haddii aad rabto in aad isticmaasho iPhone sida kamarad mini inay sawiro qaataan, ka dibna inta badan aad kaydinta iPhone waa in la degan sawiradaada. Waa dhibaato: gurmad oo dhan photos in computer si lacag la'aan ah ilaa meel photos soo socda cusub ama sii sawiro qiimo leh oo ku saabsan iPhone si joogto ah u aragto. Ha dhibin. Dhab ahaantii, waxaad nici karaan sawiro (yareeyo xajmiga sawir) on your iPhone.
Sida loo yareeyo Photo Size on iPhone
Yaraanayaan sawirada ma fududa on iPhone. Qaar ka mid ah barnaamijyadooda u muujiyaan in ay awoodaan in ay kaa caawiyaan in aad resize sawiro aad on your iPhone yihiin. Dhab ahaantii, iyagu ma awoodo. Aad u ogaato, ku iPhone ah, app ah ma heli karaan xogta ee app kale, sida Photos. Haddii aad rabto in aad si loo yareeyo sawirro iPhone, waa in aad ka heli qalab desktop inay sameeyaan hawsha ah. Halkan waxaan kuu soo jeedinaynaa in ay isku dayaan hawadda Photo ee Wondershare SafeEraser . Waxaa hoos u dhigi doontaa size sawir in 25% ka mid ah tirada asalka ah oo aan wax badan ka soo gaartay tayo leh. Ka dib markii ay sii yaraanaya, waxaad arki kari maayo wax farqi ah oo u dhexeeya mid ka mid ah asalka ah iyo mid ka mid ah dhowr qeybood aragga. Fiiri sida ay u resize - idiinkala hadhin photos on iPhone.
Tallaabada 1. Download Wondershare SafeEraser
Hel xirmo rakibidda Wondershare SafeEraser ama Wondershare SafeEraser u Mac ka on your computer sida uu nidaamka qalliinka computer aad. Ku rakib barnaamijka si sax ah. Ka dib ka dibna waxa aan bilowno.
Isticmaal cable USB in aad iPhone yimaado leh in ay ku xidhmaan aad iPhone aad kombiyuutarka. Guji "Trust" aad iPhone in ay aaminaan kombiyuutarka. Ka dib markaas, waxaad arki kartaa in Wondershare SafeEraser ogaadaa aad iPhone, waxay soo bandhigeen in uu furmo suuqa hoose.
Tallaabada 3. Scan for photos xajmi badan oo ku saabsan iPhone
In uu furmo suuqa hoose ee xaq, guji "Photo hawadda ', daynin barnaamijka baarista iPhone sawiro badan oo dhexdhexaad ah. Habkaani kaliya ugama noqon photos in aad qaaday oo aad iPhone.
Tallaabada 4. dooro sawiro si loo yareeyo
In bogga natiijada, barnaamijka si toos ah u doortaan oo dhan sawirada. Waxaad uncheck kartaa sawiro ah in aadan rabin in si loo yareeyo. Ka dibna riix 'Start'. Marna ha ka welwelina ee photos asalka ah. Waxaad arki, waxaad riixi kartaa Menu ugu weyn ee ka geeska sare ee midigta ah barnaamijka, Settings dooro in gurmad ah sawirada asalka ah ka hor inta compressing.
Tallaabada 5. In la yareeyo xajmiga sawir
Markii geeddi-socodka lagu yareeyo xajmiga sawir la dhammeeyo, waxaad ka arki kartaa kaydinta aad ku badbaadi oo inta kaydinta weli waxa uu ku mashquulsan. Oo weliba waxaad ka heli doontaa in kuwan sawiro aad iPhone u muuqataa mid ah sida kuwa asalka ah.
Dpwnload version tijaabo ah SafeEraser u leedahay in isku day ah!
Resize Photos on iPhone Video Tutorial
Xiriirka u dhexeeya Size Image iyo Resolution Image
Size image ayaa go'aamisa sida faahfaahsan image uu u muuqdo iyo sida weyn oo ay tahay. Fahamka sida size image iyo shaqada xal wada waa mid fudud xasilloon. Images Digital ka kooban yihiin god oo midabo yar oo lagu magacaabo pixels iyo pixel kasta waxaa ka buuxsamay midabka adag. Marka Khaanadaha midabka yar yihiin socda qorsheysay in ay ka mid kale, image siman oo cad oo la aasaasay. Tani waa sida sawirada digital waa la wada saaray.
Size image waxaa go'aamiya wadarta pixels uu ka samaysan yahay sanamyada qorraxda. The pixels dheeraad ah oo loo isticmaalo si ay u abuuraan image ka, image u faahfaahsan oo dheeraad ah ku noqon doono iyo baaxadda weyn. Inkasta oo sanamyada waaweyn fiiri af badan oo faahfaahsan oo dheeraad ah, sawirada yar faahfaahin ka yar yihiin dhakhso u furo, load iyo wadaagaan.
> Resource > iPhone > Sida loo Resize Photos on iPhone - hadhin / yareeyo Photo Size